Kupikira Hadoop nyanzvi Hurukuro - chii chaunofanira kuziva uye kuita?
Cracking Hadoop developer Hurukuro
Chii chinonzi Hadoop developer chiri pamusoro?
Hadoop inobatsira sei?
Mazano uye matanho ekutyora hurukuro yeHadoop
Apache Hadoop ishizha, yakazaruka-tsime; Java-based programming structure yakarongerwa kugadziriswa kwakachengetedzwa uye kuparadzirwa kwegadziriro yehuwandu hwemashoko anowanzozivikanwa seBig Data. Inogona kuonekwa sechisarudzo chekusarudza pane yako kuti upe nguva yakawedzerwa kuwedzera ruzivo rwakakosha rweHadoop uye zvarinoshandisa kuitira kuti iwe unobereka mukunyengedza hurukuro yeHadoop yekuvandudza.
Muchikamu chinyorwa chino tinofanira kutora gander pane chikamu chekutsvaga kunonyanya kukoshesa iwe unofanirwa kuyeuka pane imwe nguva iwe unoshuva kugadzirisa nyika iyo inofadza uye inofanirwa kuita basa seHadoop.
Muchiitiko chekuti iwe uri mutsva zvachose munyaya yacho, ngatitangei nemhosva yekugadzira zvinhu kunze kweHadoop wekugadzira. Chaizvoizvo pane kungopesana kusinganzwisisiki pakati pese sevari vaviri vari mubasa rekunyora mazano uye programming. Kusiyana kwakanyanya ndeyekuti Hadoop nyanzvi anofambisa basa guru reData Data. Ruzivo rwakakura runotaura nezvemazana akawanda emashoko akayerwa mu petabytes, exabyte uye zettabyte, izvo zvakapfuura kushandiswa kwemashoko echimiro kugadzirira zvishandiso.
Chimwe chinhu chakanyanya kufarirwa neHadopop ndechekuti inogona kubata zvakanyanya ruzivo rwemashoko. Mabhizimisi ari kushanda mukushanyirwa, hurumende inshuwarisi, mari, kuzivisa, nezvimwe zvinoda Hadoop kuita, kutarisira, kuputsa uye kubata zvinyorwa zvakawanda zvemashoko.
Pano rumwe rutivi, Hadoop inokonzera kushivirira. Icho chinoreva kuti inopa kufambira mberi kusinganzwisisiki sezvo hurongwa huchikurumidzira huchienda pane imwe nzvimbo mune imwe nguva yenhare yakarasika.
Senyaya yekukosha kwekutanga iwe unoda ruzivo rwakakura rwezviratidzo zvakasiyana-siyana, zvinyorwa, zvinongororwa, maitiro, nezvimwe izvo zvinoumba Hadoop. Zvakanyanya kunyanya kukosha iwe unofanirwa kuva nekwanisi yekushandisa iyo ruzivo. Uyezve, simbisa unyanzvi hwako hwepabonde nechinangwa chaunogona kufambisa maonero ako nenzira inobatsira. Iva neruzivo newakawana iwe uye uzvichengetedze uchitaridzirwa nehuwandu hwezvino uye hunotarisirwa mundima iyi. Ramba uchifunga kuti hapana chinotsiva basa rakashingaira, uye nezvinhu zvakakodzera uye basa rakashinga, iwe unogona kunyatsoona nzira yekuwana yako fantasy kushanda seHadoop developer mumusangano wepamusoro.